आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, कुन बार के गर्न पाइने ? « Kakharaa
आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो, कुन बार के गर्न पाइने ?
२५ भदौ, काठमाडौं । बिहीबारदेखि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले गत भदौ ३ गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा बुधबारदेखि थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरिएको हो ।
अरु के–के मा छुट रु